Fanahiana, fanahy iniana… ady fiady | NewsMada
Fanahiana, fanahy iniana… ady fiady
Par Taratra sur 25/11/2017
Hanao ahoana ihany ny fifidianana filoha amin’ny taona 2018? Efa ao anatin’izany tanteraka izao ny mpanao politika sasany, indrindra ny mpitondra fanjakana: matahotra fadiranovana tsy ho tafaverina eo… Mba efa mahatsapa sy mitsara tena ihany fa tsy mahomby, ka tsy hahazaka vahoaka intsony?
Izany no mampikoropaka sy mampihazakazaka amin’ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana? Rehefa izay no itondrana sy itarihana ny raharaha: avela samy hanao izay afany sy efany, raha ny fijerin’ny hafa. Tsy vitan’izay, eo koa ny paipaika sy kajikajy politika maloto handresena amin’ny fifidianana.
Efa miseholany sahady izao ny fifandroritana amin’izay fiatrehana fifidianana izay. Eo, ohatra, ny amin’ny fandrafetana lalàm-pifidianana: tsy atokisan’ny olona ny mpitondra, na inona lazaina sy fanamarinan-tena. Efa hita sy mampikoy tsinona ny vita tao anatin’izay efa-taona latsaka izay.
Be ny tsy fanarahan-dalàna hibahanana eo amin’ny fahefaham-panjakana: niniana tsy natao ny fifidianam-paritra, saika natsangana ny fitsarana manokana misahana ny heloka ara-bola sy hetra ary toekarena, notsapatsapaina haverina ny “Ni… Ni… “… Tsy inona fa hanilihana izay atahorana amin’ny fifidianana.
Amin’izao, tonga amin’ny fifandroritana ny lalàm-pifidianana: fanahiana ny an’ny antoko politika sy ny firaisamonina sivily, fanahy iniana ny an’ny fanjakana. Tsy ho araka ny fakan-kevitra natao ny vokatra farany, amin’izay mahametimety ny mpitondra ihany. Ny mpanao lalàna, hankatoa fahatany?
Hanao ny ataony amin’izay handrobany fandresena amin’ny fifidianana amin’ny fomba rehetra ny fitondrana na iza hiteny, na iza tsy faly. Niaraha-nahita ny traikefa vita tamin’ny fifidianana kaominaly sy senatorialy, taona 2015: hosoka, hala-bato, fividianana mpifidy, fandrahonana, fanerena…
Inona no (h)atao fa izay izao ny fandehan-draharaha? Ady fiady… Miteny aza ny tena, tsy ahoana. Vao mainka fa mangina sy tsy mihetsika? Ahina ho fifandroritana tsy hisy farany ny fifidianana, raha manao fanahy iniana amin’ny saim-pantany hatrany tsinona ny mpitondra. Ho hitan’ny havany eo…